Ogaden News Agency (ONA) – HWF JWXO oo Waraysi Mug Leh Siiyay Radio Xoriyo.
HWF JWXO oo Waraysi Mug Leh Siiyay Radio Xoriyo.
Posted by Dulmane	/ February 3, 2019
Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Maxamed Ibraahim Mursal ayaa waraysi dhinacyo badan taabanayay siiyay ideecada Radio Xoriyo oo ku hadasha Af-ka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia.
Wariyaha Radio Xoriyo ee magaalada Jigjiga ayaa Hogaanka waydiiyay marxalada uu wadanka Ogadenia marayo iyo isbadalka kuyimid mudadii 4ta bilood ahayd ee madaxda JWXO iyo guud ahaan Jabhadu ay wadanka joogtay?
HWFJ Mudane Maxamed Ibraahim ayaa sheegay in guud ahaan wadanku uu kujiro xili diraac ah, isagoo sheegay in dayrtii udambaysay aan lahelin roob badan, balse gugii hore uu aad ufiicnaa.
Sidoo kale Hogaanka ayaa sheegay in ay meesha kabaxeen beerihii ay dadku abuuran jireen iyo waliba ganacsigii kadib rajiimkii hore oo dadka cunaqabateeyay.
Warihaya RX ayaa Hogaanka waydiiyay Maxaa iska badalay Eray bixintii iyo hadafkii JWXO?
Mudane Maxamed Ibraahim HWFJ ayaa kujawaabay in hadafkii guud ee JWXO uusan waxba iska badalin, balse Baraha bulshada dadka lagu wareeriyay, Hogaanka ayaa xubnaha JWXO iyo guud ahaan bulshada Soomaalida Ogadenia ku wargaliyay in warbaahinta JWXO ay tahay mid Wararka Ogadenia oo dhan laga heli karo ayna haboontahay in dadku ay iyada lasocdaan si Warar xaqiiqo ah ay uhelaan.
Wariyaha RX ayaa Hogaanka waydiiyay ma idiin qorshaysan tahay in aad furtaan TV ay Jabhadu leedahay?
Wuxuuna Hogaanku ku jawaabay qorshahaanaga koobaad ee mustaqbalka dhaw waa in aan helaa TV iyo Ideecad FM ah si aan bulshadaanada uga haqabtiro Warar sugan oo aad loogu ooman yahay.
Wariyaha RX ayaa Hogaanka waydiiyay JWXO waxay noqotay Xisbi rajo intee dhan bay qabtaa in ay guulaysato?
Wuxuuna HWFJ sheegay in uusan ka hordhacaynin qorshaha xisbiga, balse ay JWXO haysato taageerada shacabka Soomaalida Ogadenia 100% taasna laga dheehan karo Xiliyada madaxda JWXO ay Gobolada wadanka marayaan oo dad aad ubadan oo aan qasab lagusoo bixinin ay soobaxayaan iyagoo calanka Jabhada lulaya.
RX ayaa Hogaanka waydiisay goormuu dhaqan galayaa heshiiskii JWXO Iyo Itoobiya?
Wuxuuna Hogaanku yidhi dabcan qayb kamid ah heshiisku wuu dhaqan galay oo waakan aan dhulkaanagii si xor ah howlahaanagii uwadano qaybaha kalana waxaa loosamaynayaa gudiyo isku dhaf ah oo dhamaystira.
RX ayaa Hogaanka waydiisay JWXO maxaa uga qorshaysan colaada Soomaalida iyo Oromada??
Wuxuuna Hogaanku sheegay in JWXO ay dhowr jeer kahadashay kana xuntahay colaada balse wuxuu Hogaanku sheegay in dowlada Deegaanka iyo mida Fadaraalku ay si wada jir ah uga shaqeeyaan joojinta colaadaha. Sidoo kale Hogaanka ayaa sheegay in shacabka Soomaalida Ogadenia looga baahan yahay in wixii khilaaf ah oo dhexdooda ah ay kudhameeyaan qaab wadahadal ah.
RX ayaa Hogaanka waydiisay maxaa kasoo baxay kulankii madaxda JWXO Iyo odayaasha beelaha Garxajis?
Wuxuuna mudane Maxamed Ibraahim sheegay in dadku ay yihiin dad isku dal, dan iyo dhaqan ah, Isla markaana loobaahan yahay in isku hadaf la ahaado, wuxuuna Hogaanku sheegay in Codsigii odayaasha beelaha Garxajis ay JWXO aqbashay wax wanaagsana uu kasoobaxay kulankoodii.
Ugu dambayntii wariyaha Radio Xoriyo ayaa Hogaanka siiyay kalmad dardaaran ah.
Wuxuuna halgame Maxamed Ibraahim Hogaanka Warfaafinta JWXO shacabka Soomaalida Ogadenia kula dardaarmay in ay ilaaliyaan Midnimada iyo ismaqalka waxyaabaha dhexdooda ahna ay dhaqankooda wanaagsan kuxaliyaan, Isla markaana ay isku duubnida kashaqeeyaan.